တရုတ်အေးဘဝထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်ဖွဲ့စည်းစက်အသုံးပြုမှုကိုလှိမ့် | Zhongtuo
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဖွောငျ့နှင့် panel ကိုစက်
အဝေးပြေး Guardrail စက်
အအေးကိုလှိမ့ဖွဲ့စည်းစက်တွေ၏စကားမှကြွလာသောအခါ, လူတွေအများစုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မရှိကြပေ။ သို့သော်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကစွန့်ခွာလို့မရဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတွက်အိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးထံသို့မရောက်ရ။ စက်တွေဘယ်လောက် imporant ချမ်းကိုလှိမ့ဖွဲ့စည်း, ပြသရန်ဥပမာတစ်ခုများအတွက်ဘရာဇီးစီမံကိန်းကိုယူပါ။
ဘရာဇီးကမ္ဘာပေါ်မှာပဉ္စမအဆင့်, 8.547.400 စတုရန်းကီလိုမီတာ (တောင်အမေရိကဧရိယာ၏ 46%) ၏စုစုပေါင်းမြေဧရိယာရှိပါတယ်; 202 လူဦးရေသန်းနှင့်အတူအကလက်တင်အမေရိကရှိတကယျ့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဘရာဇီးရဲ့သံသတ္တုရိုင်းသိုက်ကမ္ဘာပေါ်မှာပဉ္စမအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်နှင့်သံသတ္တုရိုင်း၏ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးတင်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရိုင်း၏ထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းတဲ့စက်မှုဇုန်အလားအလာနှင့်အတူသာသြစတြေးလျမှဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောယူရေနီယမ်, မန်းဂနိစ်နဲ့နီကယ်အဖြစ်သတ္တုဓာတ်မှာလည်းအလားအလာကြီးမားထိတ်ရှိသည်။ ရေချိုအရင်းအမြစ်များကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးရေချိုအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်. 12% နေရာယူထားသည်။ ဘရာဇီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကော်ဖီထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့နှင့် "ကော်ဖီနိုငျငံတျောသညျ" အဖြစ်လူသိများသည်။ ဘရာဇီးကိုလည်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသကြားထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့, ဒုတိယအကြီးဆုံးပဲပုပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့, တတိယအကြီးဆုံးပြောင်းဖူးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးတင်ပို့မှုကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးငါးဦးအကြားအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်နှင့်အမဲသားများနှင့်ကြက်သားကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတင်ပို့။
စက်တင်ဘာလ 2, 2018 ၏ညဉ့်တွင်, မီးရီယိုအတွက်ဘရာဇီးအမျိုးသားပြတိုက်ထွက်ဖဲ့, ညဉ့်အဘို့ကြာမြင့်သောမီးသန်း 20 collection များကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ကနဦးမီးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ပြတိုက်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆန့်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုအဆောက်အဦပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့သဖြင့်, ပြတိုက်မီးလောင်လွယ်ဓာတုပစ္စည်းပါရှိသောပေမယ့်မီးကာကွယ်မှုစနစ်အားမရှိခဲ့ပေ။ တကယ်တော့ထဲမှာ, ဒီကပ်ဆိုးကြီး 200 နှစ်အရွယ်ပေါ်တူဂီသမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦးတိကျစွာနိုင်ငံ၏မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ပြိုလဲရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အောက်ခြေမှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်: နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု, စီးပွားရေးအားနည်းခြင်း, ဘရာဇီးတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့် "၏ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ ပင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအဆင့်အတွက်အလယ်တန်းဝင်ငွေထောင်ချောက် "အဆက်မပြတ်ဆင်းသွားကြသည်နိုင်ငံများတွင်တစ်ဦးကနမူနာ။
သင်တန်း၏, အထက်ပါသတင်းအချက်အလက်ဤဆောင်းပါးကိုနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။ ယနေ့ဒေသခံတစ်ဦးသေးငယ်တဲ့ homestay (သို့မဟုတ်ခရီးသွားအပန်းဖြေစခန်း) စီမံကိန်းကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကျားသစ်မှာကြည့် ယူ. ဘရာဇီးအတွက်အလင်းသံမဏိလျှောက်လွှာကိုကြည့်ပါ။
အချိန် post: နိုဝင်ဘာ-07-2018
Cangzhou Zhongtuo Roll Machinery Co. , Ltd ဖွဲ့စည်းခြင်း
E-mail ကို: coo@zhongtuocn.com
မေး: တိ, ငါသည်အချို့သောပလပ်စတစ်ယိုစီးပိုက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ သွား. , အားလုံးအမျိုးအစားများမှာရှာဖွေနေပြီးနောက်, ငါ့ဦးခေါင်းနာကျင်လာတယ်။ ငါစတိုးဆိုင်ထားခဲ့ပါနှင့်အချို့သောသုတေသနလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတစ်ဦးပလတ်စတစ်ပိုက်လိုအပ်ရာများအတွက်အများအပြားစီမံကိန်းများကိုရရှိပါသည် ....
ညဦးယံအချိန် Update ကို: ဖြတ်ကျော်တောင်တန်းပိုက်လိုင်း r ...
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တရားသူကြီးမှအမှန်တကယ်သစ္စာစောင့်သိသူဘာသာရပ်မအကြံပေးမဟုတ်သလိုလိုမင်းထက်အစီအမံမှတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ လစ်ဘရယ်ကက်ဘိနက်နီးပါး 600,000 ba add မယ်လို့ရသောဖြတ်ကျော်တောင်တန်းပိုက်လိုင်းတိုးချဲ့, Re-အတည်ပြုထားပါတယ် ...
Hg50 Tube လိုင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်သူများအချို့ကိုမကြာသေးခင်ကတစ်လှည့်ဖျားဘို့ဧရာရဲ့ TCR အဆင့်မြင့် Pro ကို SL1 ကိုယူသောအခါ, ကမ်းလှမ်းမှုအရာအားလုံးကိုသင် thoroughbred တစ်ပြိုင်ကားကနေလိုခငျြချင်ပါတယ်တဲ့စစ်မှန်စွာအထင်ကြီးစက်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကသက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်အရာကို expe နိုင်ပါတယ် ...
ကျွန်တော်တို့သည်အစက်ဖွဲ့စည်းခြင်း ZHONGTUO Roll အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနှင့်တောင်အမေရိကအတွက် 60 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများဆီသို့ငါတို့ထုတ်ကုန်ရောင်းချခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့နိုင်စွမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Roll စေမည်ကြောင်းစက်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူယုံကြည်မှုရှိပါတယ် ...
အအေးကိုလှိမ့ဖွဲ့စည်းစက်တွေ၏စကားမှကြွလာသောအခါ, လူတွေအများစုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မရှိကြပေ။ သို့သော်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကစွန့်ခွာလို့မရဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတွက်အိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးထံသို့မရောက်ရ။ ဥပမာတစ်ခု t ကိုများအတွက်ဘရာဇီးစီမံကိန်းကိုယူပါ ...
Rolling Shutter တံခါးအလိပ်စက်ပြုလုပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း , Stud Track Machine, Hg50 Tube လိုင်း , စက်ပြုလုပ်ခြင်းအဆင့် Tile , မိုးမိုးစာရွက် Tile လုပ်ခြင်းစက်, Machinery ဖွဲ့စည်းခြင်းသတ္တုအလှဆင် ,